Maraykanka, 01 July 2016
Khamiis 1 July 2016
Safiirka Maraykanka ee Somalia oo la Dhaariyay
Maraykanka ayaa Somalia u diraya Stephen Schwartz oo ah safiirkeedii u horreeyay muddo 25 sano ah oo shalay lagu dhaariyay magaalada Washington. Safiirka ayaa sheegay in la joogo wakhtigii la sameyn lahaa ciidamo Soomaaliyeed oo qaran.
Daadad 23 Qof ku Dilay Gobolka West Virginia
Gudoomiyaha gobolka West Virginia ee dalkan Mareykanka ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo ay galeen 44 degaan oo ka mid ah gobolka ka dib markii ay ku dhufteen daadkii ugu xumaa ee gobolka ka dhaca muddo boqol sanadood ah.
Japan: Dibadbaxyo Maraykanka lagaga soo Horjeedo
Kumanaan qof ayaa maanta oo Axad ah iskugu yimid jasiiradda Okinawa ee dalka Japan, iyaga oo dhigay mid ka mid ah dibadbaxyadii ugu waaweynaa muddo labaatan sano ah ee looga soo horjeedo saldhigyada ciidanka Maraykanka ee dalkaas ku yaalla
Obama oo u Sheegey Reer Orlando Inay Murugada La Qeybsanayaan
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo magaalada Orlando u tagay in uu la baroor diiqo ehellada dadkii lagu laayay maalmo ka hor halkasi, ayaa sheegay in aanu jawaab u heyn su’aalaha ah waxay u soo laalaabanayaan toogasha wadareedyada gudaha Mareykanka.
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif waa Imaamka Masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis, waxaana sida uu u arko weerarkaasi uga warramay weriyahayaga Maxamuud Mascadde.
Mareykanka ayaa weli ah dalka dhoofiya hubka ugu badan caalamka, isaga oo dalalka dunida, gaar ahaan kuwa bariga dhexe, ka iibiyey sanadkii tagay hub lagu qiimeeyey 23 bilyan oo dollar.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, ayaa weerarkii subixii hore ee Axadda xilliga Mareykanka ka dhacay magaalada Orlando ee gobola Florida ku tilmaamay fal argagixiso, islamarkaasina ku saleysan naceyb.
50 qof ayaa ku dhimatay, 53 kalena waa ay dhaawacmeen, ka dib markii nin lagu magacaabay Omar Mateen uu weerar ka geystay goob lagu caweeyo oo ku taalla magaalada Orlando, ninkaas oo markii dambe la dilay.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ansixiyay awoodo cusub oo la siinayo ciidamada Mareykanka ee ku suggan dalka Afghanistan, kuwaa oo dabcinaya xadidaadyo horey uga saaraa duqeymaha dhinaca cirka
Feeryahan Muhammad Ali oo Maanta La Aasayo
Tobannaan kun oo dad ah ayaa isugu soo baxaya magaalada uu ku dhashay Muslimkii ugu caansanaa Mareykanka abid, si ay uga qeyb galaan aaska loo sameynayo Kalaay maanta oo Jimco ah.
Madaxweyne Obama oo Ayiday Hillary Clinton
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa ayiday oo taageeray Hillary Clinton, laba maalmood ka dib markii ay noqotay qofka noqonaya musharraxa madaxtinimo Maraykanka ee xisbiga Dimoqraadiga.